Tanàna tsara tarehy indrindra any Italia | News Travel
Tanàna tsara tarehy indrindra any Italia
Mariela Carril | 26/04/2022 17:00 | mpitarika, Italia
Mieritreritra ny handeha ho any Italia ve ianao? Firenena tsara tarehy re izany! Miaraka amin'ny tanàna tsara tarehy maro dia sarotra tokoa ny mandamina lalana tsy hamela na inona na inona tsy ho hita… Soa ihany fa azonao atao ny manoratra ny lahatsoratray anio momba ny tanàna tsara tarehy indrindra any Italia ary raiso ireo.
De Avaratra mankany atsimo, ireto ny sasany amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Italia. Hivezivezy!
Ho an'ny maro dia io no tanàna romantika indrindra ao amin'ny firenena, ny tsara tarehy "tanànan'ny lakandrano", miaraka amin'ireo tranobe tsara tarehy, lakandrano miolikolika ary fiainana ara-kolontsaina manankarena. Ny mpanakanto sy ny mpifankatia dia nisafidy izany ary mbola nisafidy izany.
Venice dia manana tetezana mihoatra ny 400anisan'izany ny malaza Tetezana ny sento, ary ny fandehanana gondola no traikefa tsara indrindra (na dia tsy ny mora indrindra aza). Rahoviana ianao no tokony hitsidika an'i Venise? In Aprily, Mey, Septambra na Oktobra izay rehefa vitsy ny mpizaha tany ary ny mari-pana dia mbola mafana sy mahafinaritra ary Tsy dia mafana loatra.
Raha tia lamaody ianao dia tsy misy toa azy stylish Milan, mecca ho an'ireo izay tia miantsena ihany koa. Ny fivarotana amin'ny Via Della Spiga sy Via Montenapoleone tsara izy ireo, fa marina fa tsy lamaody fotsiny i Milan. Ny tranombakoka dia zavatra tsara tarehy, avy amin'ny Katedraly Milan, ny fahatelo lehibe indrindra eran-tany, mandalo ny malaza Scala ary ny lapan'ny mpanjaka rehetra ao aminy.
Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Milan koa ao Aprily, Mey, Septambra ary Oktobra ary noho ny antony iray ihany: mbola mafana ny andro fa tsy manjavozavo.
Amin'ny ankapobeny dia tsy isaina amin'ireo tanàna tsara indrindra any Italia na tsara tarehy indrindra izy io, fa tsy isalasalana fa izany ary raha mandeha ianao dia ho hitanao ny antony. Turin dia any avaratry ny firenena sy ny azy maritrano manana trano Renaissance, Baroque, Rococo, Art Noveau ary Neoclassical… Raha mandeha eny amin'ny arabe ianao dia toy ny manao dia ara-javakanto ianao, nefa manana izany koa kianja sy zaridaina.
Ny background tonga lafatra dia Alpes, adiny iray monja, miaraka amin'ny toeram-pialan-tsasatra ski sy ny truffles azy. manao ahoana ny avaratra tokony handeha amin'ny fahavaratra, eo anelanelan'ny Jona sy Aogositra, ny volana tsara indrindra hankafizana ny hakantony eny an-kalamanjana. Ary eny, raha tianao fanatanjahan-tena amin'ny ririnina ary afaka mividy azy ireo ianao, amin'ny ririnina koa.
Tsara ihany koa izy io ary maro ny mpizaha tany mandeha eo, fa Trento dia toerana mahafinaritra izay mendrika ny ho ao anatin'ity lisitra ity. Manana a gastronomy lehibe, un tontolo iainana voajanahary tsara tarehy ary tolotra isan-karazany ho an'ny mpizaha tany.
Amin'ny ririnina dia afaka manao fanatanjahan-tena mangatsiaka toy ny ski sy snowboarding, ny kalitaon'ny lanezy dia malaza ary misy toerana malaza toy ny San Martino, Castrozza, Canazei na Madonna di Campiglio.
Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Trento dia hatramin'ny volana Mey ka hatramin'ny Septambra, miaraka amin'ny hafanana mafana kokoa ary orana kely, raha mieritreritra ny hanao Trekking, ohatra. Mazava ho azy fa ny vanim-potoana ririnina Izy no mpanjakavavin'ny ski.
Raha tia mihinana ianao dia ity no tanànanao. hanandrana matsiro ianao pizza, paty, fromazy, hena ary divay italiana tsara indrindra. Ny tsara indrindra dia tsy tanàn-dehibe lafo vidy izany ka afaka mivoaka any amin'ny trano fisotroana na trano fisakafoanana tsy vaky kitapo.
Ary eny, misy zavatra hafa ankoatra ny sakafo, tsarovy fa ny UNESCO dia nanambara izany hatry ny ela Lova eran-tany. Rahoviana ianao no tokony handeha? Amin'ny lohataona na amin'ny fararanosady tsy mangatsiaka loatra no tsy mafana.
Efa eo afovoan'i Italia isika ary tsy afaka manao lisitry ny tanàna tsara tarehy indrindra eto amin'ny firenena raha tsy manonona ny renivohiny. Ireto ny trano lehibe indrindra tamin'ny Fanjakana Romanina taloha: ny Forum, ny Colosseum, ny Fandroan'i Caracalla sy ny maro hafa, fa izy koa ny tanànan'ny Fontana di Trevi, Spanish Steps na Vatican sy ny hareny.
Trastevere Ny manodidina ny Romanina no mandany ny tolakandro, misy trano tranainy maro, arabe mahafinaritra ary trano fisakafoanana na aiza na aiza. Roma dia tanàna ahafahanao mandehandeha foana ary ny lohataona na ny fiandohan'ny fararano no fotoana tsara indrindra hitsidihana azy.
Tanàna tiako indrindra. Saika tsy manan-tsahala ny kolontsaina sy ny maritrano ao Florence. dia ny tanàna tsara tarehy indrindra any Tuscany, ny tanànan’i Michelangelo sy Dante, Galileo ary Raphael. ho reraka ianao tsidiho ny tranombakoka sy ny galleries, fa mba handeha amin'ny alalan'izy ireo koa arabe medieval na mitaingina bisikileta.
Tsy maintsy jerena ny Duomo sy ny tilikambo lakolosy, raha tianao ny Davida, ny Lapa Taloha na ny sahan'ny tsara tarehy Lapan'i Pitti. Fa ity no malaza indrindra amin'ny rehetra raha ny tena marina dia ny mandeha an-tongotra, mandeha bebe kokoa, mandeha an-tongotra fotsiny. Mahafinaritra ny zava-drehetra.
Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Florence dia hatramin'ny volana Mey ka hatramin'ny Septambra satria mafana ny andro ary betsaka ny fiainana an-kalamanjana. Aza adino ny misakafo eny amin'ny tsena afovoany.
Raha efa any Tuscany ianao dia tsy afaka miala amin'ny lalana mankany Siena. Kanto sy tena romantika izy io, misy arabe sy tranobe tamin'ny Moyen Âge. La Katedraly Siena Kanto ny fomba gothic izay tsy hohadinoinao.
Raha afaka misafidy daty ianao dia ny tsara indrindra mandeha amin'ny tapaky ny faran'ny lohataona, eo anelanelan'ny Aprily sy Mey, na tany am-piandohan’ny fararano, teo anelanelan’ny Septambra sy Oktobra.
Nandeha nivantana tany atsimon’i Italia izahay, izay faritra mahantra indrindra eto amin’ny firenena nefa manana hatsaran-tarehy maro. Moyen Âge. Bari dia ody amin'ny a gastronomy matsiro sy lavadrano seranana. Ankoatra izany, manana tora-pasika lehibe sy rano manga be.
Bari dia tanàna carte postale misy azy ny tsara indrindra dia ny misakafo sy mandeha an-tongotra ary misasa amin'ny masoandro amin’ny iray amin’ireo tora-pasika misy azy. Noho izany, tsy isalasalana, mandehana rehefa lava ny andro, amin'ny volana jolay. Tsy dia mety loatra ny volana Aprily satria io no volana mando indrindra amin'ny taona ary ho an'ireo tia tora-pasika sy ranomasina dia tsy misy vaovao ratsy kokoa noho ny orana.
Avy amin'ny seranan-tsambony dia miainga ny dia mankany Gresy, Kroasia, Montenegro na Albania.
La Morontsiraka Amalfi Toerana mahafinaritra foana izy io. Io no carte postale mahazatra amin'ny hatsarana rehetra mety ho an'i Italia ary anisan'ireo tanàna amorontsiraka maro eto, i Positano dia tsy isalasalana fa ny perla. eFA fiainana alina, gastronomy tsara, divay tsara ary fomba fijery tsara indrindraENY Raha manofa Vespa ianao dia hanana fotoana tsara indrindra.
Mazava ho azy fa tsy toerana mora vidy izy io fa azonao atao foana ny mandany kely. Hevitra tsara izany tsidiho ny Positano amin'ny lohataona, eo anelanelan'ny Mey sy Jona, miezaka foana ny tsy handeha amin'ny vanim-potoana ambony satria be dia be ny olona ary ny vidiny dia mandalo amin'ny tafo.
Any atsimon'ny firenena ary Tsy tanàna lehibe loatra izy io. Raha ampitahaina amin'ny tanàna italiana malaza hafa i Matera, dia toa kely sy vitsy mpizaha tany, fa izany no hevitra indraindray, sa tsy izany?
Matera mahafinaritra ny volana mafana kokoa, eo anelanelan'ny Mey sy Oktobrasatria tsy be ny orana.
Palermo dia iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Sisila, raha ny marina dia renivohitra ara-kolontsaina sy ara-toekarena ary manana ny zava-drehetra ho an'ny mpizaha tany. ny Tsenan'ny arabe Tsara izy ireo, indrindra fa ny Capo sy Vucciria, miaraka amin'ny vokatra vaovao sy fahatsiarovana maro hovidiana sy omena.
Teo anelanelan'ny Aprily sy Jona dia asaina mitsidika., rehefa mafana ny andro nefa tsy mampahory.
Mazava ho azy fa manangona fotsiny ity lisitra ity ny sasany amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Italia. be dia be ny hafa!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Italia » Tanàna tsara tarehy indrindra any Italia
Tanàna mahafinaritra any Segovia
Nandamina fitsangatsanganana manerana an'i Eoropa